काे'राे'ना बिपत : अस्पताल'हरूका बिग्रिएका भेन्टिलेटर बनाउन सघाउदै डा. महावीर पुन - Maxon Khabar
Home / News / काे'राे'ना बिपत : अस्पताल'हरूका बिग्रिएका भेन्टिलेटर बनाउन सघाउदै डा. महावीर पुन
काे'राे'ना बिपत : अस्पताल'हरूका बिग्रिएका भेन्टिलेटर बनाउन सघाउदै डा. महावीर पुन
२०७६ चैत २३ नेपालमा को'रो'ना भा'इ'र'स संक्र'मि'तकाे संख्या थपिँदै जाने क्रम जारी छ याे घडीमा नेपाल'मा रहेका अस्पताल'हरूका भेन्टिले'टरहरू एक्टिभ अवस्थामा राख्नु पर्ने भएपनी अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर'हरू मर्मत गर्ने प्रा'विधिक र सा'माग्री नपाउँदा त्यसै थन्किए'का हुन । बिगत2साता देखि नेपाल'मा लक'डाउन कायम छ।
य'स्तो बेला भेन्टिलेटर मर्मत गर्ने जन शक्ति'काे अभाव भए'काे बताइए'काे छ, तर डा. महाबिर पुन मगर नेतृत्व'काे राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र'ले केही भेन्टिलेटर मर्मत सुरू गरे'को छ । महा'वीर पुनले ट्रमा सेन्टर'का बिग्रे'का7वटा भेन्टि'लेटर आविष्कार केन्द्रमा मर्मत गर्न थालिए'को बताउनु'भयाे । को'रो'ना सं'क्रमित बढ्दै गए'पछि स्वास्थ्य तथा जन'संख्या मन्त्रालय'ले अस्पताल'हरू'मा रहेका भेन्टि'लेटर यक्टिभ अवस्था'मा राख्न आग्रह गरेको थियो। त्यस'पछि भेन्टिलेटर मर्मत प्रक्रिया अस्पताल'हरूले सुरू गरेका छन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराज'गञ्जको6वटा ट्रमा सेन्टरका 10 वटा भेन्टि'लेटर पनि मर्मत गर्नु'पर्ने अवस्था'मा रहेकाे बताइएकाे छ । ललितपुर'स्थित गणेश'मान सिंह मेमो'रियल अस्पताल'का4वटा भेन्टि'लेटर पनि मर्मतको पर्खाइमा छ। प्रावि'धिक नपाइए'को र सामग्री अभाव भएकोले भेन्टिलेटर मर्मत गर्न नसकिए'को अस्पताल'हरूले बताएका छन्। यस्ताे अबस्थामा सबैले डा. पुन लाइ गुहारेका हुन ।
पुनले भेन्टिलेटर मर्मत मात्र होइन, बिभिन्न अस्पताल'मा बिग्रिए'का भेन्टिलेटर अाबिश्कार केन्द्लाइ मर्मत गरीदिन अनुराेधकाे अाेइराे नै अाए पछी सम्बन्धित ठाउमै गएर मर्मत गर्न थप प्रावि'धिक पनि खोज्न सघाए'का छन । सबै भेन्टिलेटर मर्मतका लागि आविस्कार केन्द्र ल्याउन लक डाउनका बेला सम्भव नहुने उहाले बताउनुभयाे । ट्रमाको7वटा मध्ये2भेन्टिलेटर मर्मत गरिसकिएकाे र अन्य भने मर्मत भैरहेकाे उहाले बताउनु'भयाे । बिग्रेका भेन्टिलेटरको अवस्था हेरेर मर्मतका लागि कुनै ५/७ देखी २५/३० हजार लाग्न सक्ने डा. पुनले बताउनु भयाे । हामी'सँग यति भेन्टिलेटर बिग्रेका छन, बनाइ'दिन सक्नुहुन्छ भने बनाइ'दिनु'पर्‍यो भनेर डाक्टर'हरूले मलाई भने'पछि जन'शक्ति खोजेको हुँ, उहाले भन्नु'भयाे,, सरकारी अस्पताल'मा बजेट भए पनि भनेको बेला भेन्टिलेटर मर्मत गर्न सक्दै'नन्, प्रक्रिया झन्झ'टिलो हुन्छ। छिटो भेन्टि'लेटर मर्मत गर्नु'पर्ने बेला छ। भेन्टि'लेटर मर्मत गर्न प्रावि'धिक मात्र होइन आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न परे पनि आफू तयार रहेको पुनले बताउनु'भयाे। पुनले भन्नु'भयाे प्राविधिक र आर्थिक समस्या परे म दिन्छु भनि'दिएको छु। बजेट भए पनि सर'कारी प्रक्रिया ढिलो हुन्छ।